धार्मिक आस्थामाथि प्रहार ऐतिहासिक माने अतिक्रमण गरेर गोठ - Samriddha Online
धार्मिक आस्थामाथि प्रहार ऐतिहासिक माने अतिक्रमण गरेर गोठ
समृद्ध अनलाईन २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १५:४७ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ५९ पाठक संख्या
ओखलढुंगा, साउन २७ गते । खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित चुलिमा रहेको ऐतिहासिक माने अतिक्रमणमा परेको छ । जनप्रतिनिधिले नै मानेमा गोठ बनाए पछि अतिक्रमणमा परेको हो ।
माने अतिक्रमण गरेर वडा नं. ८ का वडा सदस्य लमु शेर्पाले माने वस्तु गोठ निर्माण गरेको स्थानीयको आरोप छ । बौद्धधर्मको आस्थासँग जोडिएको मानेसँगै वस्तुको गोठ निर्माण गरिएको छ । माने सार्वजनिक महत्वको भएकाले व्यक्तिले भत्काउने वा अतिक्रमण गर्नु धार्मिक आस्थामाथि प्रहर भएको र ऐतिहाँसिक माने अतिक्रमण गरेर गोठ बनाउने कार्य गलत भएको स्थानीय पासाङ शेर्पाको भनाइ छ । माने भत्काउने, अतिक्रमण गर्ने वा अन्यत्र व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार सार्ने काम बौद्ध धर्मको आस्थामाथि प्रहार भएको शेर्पाले बताए । स्थानीयका अनुसार वडा नं. ८ का वडा सदस्य एवं गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी लमु शेर्पाले माने अतिक्रमण गरेको र जीर्ण अवस्थामा रहेको माने संरक्षण गर्नुको सट्टा जनप्रतिनिधीले नै अतिक्रमण गरेकोे आरोप छ ।
माने अतिक्रमण गरेर गोठ बनाएको विषयमा कुरा गर्दा लमु शेर्पाले आफुले अतिक्रमण नगरेको र माने आफैं भत्किन लागेको बताईन् । भत्किन लागेकाले अन्यत्रै सार्न समुहले निर्णय गरेको छ र आँफुले केही नगरेको उनको भनाईछ । उनले माने आफ्नै जग्गामा भएको र अन्यत्र सार्ने कुरा भएको बताईन । धार्मिक आस्थासँग जोडिएको माने भत्काएको वा अतिक्रमण भएको विषयमा वडा अध्यक्ष नगेन्द्र वस्नेतलेले जीर्ण भएकाले अन्यत्र सार्नु पर्ने भएको बताएका छन् । उनले समुहले निर्णय नै गरेर सार्ने भएको अरु कुरा केही नभएको दावी गरे ।
के हो माने ?
साधारण भाषामा बुझ्दा एक प्रकारको चौतारी हो, जहाँ बौद्ध धर्माबलम्बीले घुमेर पुज्छन् । विश्राम गर्छन्, निर्माण गर्दा योगदान गर्नेहरुको नाम ढुंगामा मन्त्रसहित लेखिन्छ र यसभित्र बहुमूल्य धातु तथा आस्थाका वस्तु राख्ने गरिन्छ । माने बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रुपमा लिईन्छ । माने निर्माण सामुहिक योगदानमा मानवको रक्षा र शान्तिको कामनासहित प्रायः सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण गरिन्छ । व्यक्तिले जग्गा दिएर बनाइए पनि यहाँ बनाइसकेपछि सबैको सरोकार र स्वमित्व रहन्छ ।
यसलाई भत्काउन वा उत्खनन गर्नु धर्म विरोधी काम मानिन्छ । माने भएको स्थलमा खोतल्नसमेत पाइदैन । यस्तो आस्था र विश्वासको वस्तुमाथि अतिक्रम गरेर गोठ बनाएको बन्दै धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।